छोटो पहिरन लगाएका युवती देख्दा पुरुषहरु उत्तेजना हुनुको कारण यस्तो छ « Postpati – News For All
छोटो पहिरन लगाएका युवती देख्दा पुरुषहरु उत्तेजना हुनुको कारण यस्तो छ
म ३६ वर्षको विवाहित पुरुष हुँ । १५–१६ को उमेरदेखि नै कुनै आकर्षक महिलाको तस्बिर वा छोटो पहिरन लगाएका युवती देख्दा उत्तेजित भएको महसुस गर्थें । साथीहरूलाई समस्या सुनाउँदा यो उमेरमा सबैलाई यस्तै हुन्छ भनेर सम्झाए, तर अहिलेसम्म पनि मलाई त्यस्तै अनुभूति भैरहन्छ । यस्तो कुरा विवाहपछि हट्छ कि जस्तो लाग्थ्यो, तर हटेन । म आफ्नी श्रीमतीसँग पूर्ण सन्तुष्ट छु । तैपनि यस्तो भैरहन्छ । यो कुरा कतै श्रीमतीले थाहा पाएर नराम्रो मान्ने हुन् कि भन्ने डर लागिरहन्छ । यस्तै अनुभूति महिलाले पुरुषलाई देख्दा हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि जान्ने मन छ । यो कस्तो किसिमको समस्या हो र किन यस्तो हुन्छ ? कतै यो मनोरोग त होइन ?
महिला र पुरुषले एक–अर्कालाई देख्दा यौन उत्तेजना हुने विषयलाई लिएर प्रशस्त चर्चा भएको पाइन्छ । विभिन्न लेखहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार आकर्षक महिला वा छोटो पहिरनमा सजिएका महिलाहरूलाई देख्दा पुरुषहरू देखेर हुने यौन उत्तेजना भिजुअल अराउजल हुन्छ भन्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
यसलाई पुष्टि गर्न पुरुषहरूले अश्लील चलचित्र बनाउन बढी मन पराउँछन् र हेर्न पनि चाहन्छन् भन्ने तर्क गरिन्छ । यसले गर्दा उनीहरूलाई भिजुअल अराउजल हुन्छ भनिएको हो, तर यसलाई मात्र आधार मानेर पुरुषमा हेरेर भिजुअल अराउजल हुन्छ भन्नु तर्कसंगत हुँदैन । यो विषय चर्चामा मात्र छैन, अध्येताहरूका लागि अनुसन्धानको उच्च प्राथमिकतामा समेत छ । यो विषयमा धेरैले चासो र चर्चा गरिरहेको हँुदा यससम्बन्धी धेरै अनुसन्धान भएका छन् । त्यसमध्ये एउटा अनुसन्धानका क्रममा महिला र पुरुष दुवैलाई एकै प्रकारको यौन उत्तेजना हुने चलचित्र देखाइएको थियो र दुईमध्ये कुनमा बढी उत्तेजना हुन्छ भनेर मापन गर्ने यन्त्र जडान गरिएको थियो । उक्त यन्त्रले उत्तेजना हुँदा यौनाङ्गमा रगतको प्रवाह कति हुन्छ भनेर मापन गथ्र्यो । यसरी गरिएको अनुसन्धानले दुवै जनामा रगतको प्रवाह एकै किसिमले भएको र यौन उत्तेजना बराबर भएको पाइएको थियो । यसरी अनुसन्धानले महिला र पुरुष दुवैमा भिजुअल अराउजल हुने र उनीहरू दुवैको दृष्टि क्षमता बराबर हुने कुरालाई पुष्टि गरेको थियो ।
एउटा कुरा फरक छ र त्यो के भने भिजुअल अराउजलसम्बन्धी अभिव्यक्ति गर्ने तौरतरिकामा भने महिला र पुरुषबीच फरक स्वभाव देखिन्छ । धेरैजसो संस्कृति अनि समाजमा महिलाले आफ्नो यौनइच्छाका बारेमा अभिव्यक्ति गर्नुलाई पापका रूपमा लिइन्छ । त्यो कतिपय समाजमा स्वीकार्य पनि हँुदैन । कतिपय समाजमा यदि महिलामा कुनै किसिमको यौनइच्छा जागृत हुन्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मान्यता हुन्छ । त्यसैले धेरैजसो संस्कृतिमा महिलाले सजिलैसँग आफ्नो यौनइच्छा व्यक्त गर्दैनन् । त्यसैले कतिपय लेख वा पुस्तकले महिलामा हुने भिजुअल अराउजलका बारेमा ठोस रूपमा उल्लेख गर्न नसकेका होलान् ।
अब फर्कौं तपाईंको प्रश्नमा, तपाईंको भनाइअनुसार तपाईंले अनुभूति गरेको कुरामा भन्दा पनि श्रीमतीले थाहा पाउने कुराको बढी डर तपाईंलाई महसुस भैरहेको हो कि जस्तो बुझिन्छ । यदि त्यसो हो भने तपाईंमा उब्जिएको डरचाहिँ मनोरोग हुन पुग्छ । पछि गएर महिलालाई देखेर हुने यौन उत्तेजनाभन्दा तपाईंसँगको डरले चाहिँ तपाईंको दैनिक जीवनलाई असर गर्न सक्छ । त्यसबाट श्रीमतीसँगको सम्बन्धमा पनि असर पर्न थाल्छ । तपाईंको कुराअनुसार अहिलेसम्म तपाईंको श्रीमतीसँगको सम्बन्ध राम्रो रहेको बुझिन्छ । त्यसैले तपार्इंले अहिले महसुस गर्नुभएको डर अनि महिलाप्रतिको अनुभूतिलाई श्रीमतीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ । यदि आकर्षणको कुरा हो भने तपार्इंले चाहेअनुसार श्रीमतीलाई कसरी आकर्षक बनाउन सकिन्छ, छलफल गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं र उहाँलाई मनपर्ने पहिरन सँगै गएर किन्न सक्नुहुन्छ ।
त्यतिमात्र होइन, एक–अर्काको प्रशंसा गर्नुहोस् । तपाईंले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने तपाईंमा छोटो पहिरन लगाएका महिलालाई देखेर यौन उत्तेजना मात्र हुने हो कि उनीहरूसँग यौनसम्पर्क पनि राख्न मन लाग्ने हो ? त्यसमा पनि प्रस्ट हुन जरुरी छ । यदि उही महिलासँग यौनसम्पर्क गर्ने इच्छा पनि हुने हो भने तपाईं कुनै पनि बेला अप्ठ्यारोमा पर्न सक्नुहुन्छ वा कानुनी झमेलामा पर्न सक्नुहुन्छ । आफ्नो समस्याको पहिचान समयमै गर्दा अब आउने दिन खुसीले बिताउन सकिन्छ ।
करुणा कुँवर, मनोविदसाप्ताहिक बाट